Basikety – CCOI N1A: hanainga rahampitso ny COSPN | NewsMada
Vonona tanteraka amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indiana, taranja basikety ny ekipan’ny COSPN, klioba eo anivon’ny polisim-pirenena. Fifaninanana izay hotanterahina any Seychelle ny 5 hatramin’ny 13 desambra ho avy izao. Ny COSPN izay hisolo tena ny firenena malagasy ary tompondaka tamin’ny fifaninanam-pirenena N1A 2018, taranja basikety, notontosaina teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, farany teo.
Delegasiona miisa 16 no hanainga rahampitso, talata 4 desambra, amin’ny 1 ora maraina, hihazo an’ny Seychelle izay hahitana ireo mpilalao sy ny mpanazatra ary ny mpikambana eo anivon’ny polisim-pirenena. Nanambara ireo mpilalao fa hitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara amin’ity fifaninanana ity. “ Tanjona ny handrombaka ny amboara amin’ity fifaninanana ity ary hitondra izany eto Madagasikara ho voninahitry ny firenena malagasy iray manontolo”, hoy ny fampanantenana nataon’ny filohan’ny COSPN, seksiona basikety, Lebiria Rufin, raha nisolo tena ireo mpilalao, izy. Ankoatra izay, nanolotra fisaorana ho an’ireo rehetra nitondra fanampiana sy nanohana ihany koa ny COSPN ary mbola manokatra ny varavarana ho an’ireo mahalala tanana vonona ny hanolotra fanampiana ho azy ireo amin’izao ady goavana hatrehan’izy ireo izao. “Ady goavana no hatrehana ka ilaina ny fanohanana avy amin’ireo tsara sitrapo ka vonona ny hifanolo-tanana aminay”, raha ny nambaran’ny solontenan’ny mpilalao.
Omaly, tonga nangata-tsodrano teny amin’ny Minisiteran’ny filaminam-bahoaka ireo mpilalao eo anivon’ity ekipa hiatrika fifaninanana any Seychelle ity. Fihetsika feno fahendrena no nentin’izy teo anatrehan’ny Minisitry ny filaminam-bahoaka satria natolotr’izy ireo ny Minisitra ny amboara azony nandritra ny fifaninanana nandraisany anjara ka nahazoany vokatra tsara. Tetsy ankilany, tsy nitazam-potsiny ny ministera fa nanome fanomezana mba ho vatsin-dalana ho an’ ireo mpilalao sy nitso-drano ny ekipan’ny COSPN.